बिर्सेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती, हुनसक्छ थाइराइडको समस्या
एजेन्सी । थाइराइड हाम्रो शरिरको एक प्रमुख इन्डोक्राइन ग्रन्थी हो जुन गलामा हुन्छ । यो तिल आकारको हुन्छ । भारतको अपालो अस्पतालका वरिष्ठ एन्डोक्राइनोलोजिस्ट डा सुबोध बांझलका अनुसार थाइराइडबाट रिलिज हुने हर्मोनबाट शरिरको मेटाबोलिजम रेट कन्ट्रोल हुन्छ ।
जब यी हर्मोनको ब्यालेन्स बिग्रन्ट तब हाम्रो शरिरिक क्रियाकलाप गडबड हुन थाल्छ ।
कति प्रकारको हुन्छ थाइराइड समस्या ?
थाइराइड समस्या मुख्य रुपमा दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा हाइपोथाइराडिज्म जसमा व्यक्तिको तौल अचानक बढ्न थाल्छ । अर्को हाइपरथाइराडिज्म, यसमा तौल तिब्र रुपमा घट्न थाल्छ ।
कस्ता गल्तीले हुनसक्छ थाइराइड समस्या ?
डा बांझलका अनुसार थाइराइड समस्या विभिन्न कारणसहित हुन्छ । खानपिन र जीवनशैलीका साथै वंशानुगत कारणले पनि व्यक्तिलाई थाइराइडको समस्या हुने गर्दछन् ।
यसका साथै हाम्रा विभिन्न गल्तीले थाइराइडको समस्या निम्त्याउने गर्दछ ।
धेरै तनाव लिँदा हुन्छ थाइराइडः
धेरै तनावले शरिरमा कार्टिसोल नामक हर्मोनको स्तर बढाउँछ । यसले थाइराइडको समस्या बढाउँछ ।
सुगर नियन्त्रण नगर्दाः
सुगर नियन्त्रण नगर्दा शरिरमा इन्सुलिन प्रतिरोध गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ । यसले थाइराइड ग्रन्थीलाई हानी पुर्याउने गर्दछ ।
अनावश्यक औषधीको सेवनः
केही औषधीले थाइराइड ग्रन्थीलाई नोक्सान पुर्याउने गर्दछ । डाक्टरलाई नसोधी औषधी सेवन गर्दा पनि थाइराइडको समस्या हुनसक्छ ।
धेरै नुन र सी फूड खाँदाः
धेरै नुन र सी फूड खाँदा शरिरमा आयोडिनको मात्रा बढ्न सक्छ जसले हाइपोथाइरायडिज्म हुनसक्छ ।
धेरै डाइट सप्लिमेन्ट लिनुः
क्याल्सियम, आइरन, प्रोटिन र सोया सप्लिमेन्ट धेरै मात्रामा खाँदा शरिरमा थाइराइड हर्मोनको ब्यालेन्स बिग्रन सक्छ ।
हावा र पानीमा हानिकारक रसायन हुनसक्छ । प्रदुषणका कारण पनि थाइराइडको समस्या निम्तिन सक्छ ।
धेरै चिया कफी, कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउँदाः
धेरै चिया कफी र कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउँदा यसमा पाइने क्याफिनले थाइराइड समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
धेरै रक्सी पिउँदाः
धेरै रक्सी पिउँदा शरिरमा हानिकारक टक्सिन बढ्ने गर्दछ । यसले थाइराइड ग्रन्थीको क्रियाकलाप बिग्रन सक्छ ।
धेरै चिल्लो खानेकुराको सेवन गर्दाः
जंक फूड, वनस्पती घ्यू, धेरै चिल्लो खानेकुरा खाँदा शरिरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्ने गर्दछ । यसले थाइराइडको समस्या निम्तिने गर्दछ ।
रातो मासुको अत्यधिक सेवनः
यसमा धेरै स्याचुरेटेड फ्याट हुन्छ । यसले शरिरको हर्मोन्सको ब्यालेन्स बिगार्नसक्छ र थाइराइडको समस्या हुनसक्छ ।